July 2013 - Page 3 of 21 - iftineducation.com
iftineducation.com – Mahad dhamaanteed waxaa iska leh rabbi SWT nabad galyo iyo naxariinsna nabigeena suuban korkiisa allaah hayeelo, Intaas kadib walaalayaal waxaan isku dayeynaa inshaa allaah in aan wax ka tilmaanno Acmaasha wanaagsan ee haboon in uu ku dadaalo qofka muslimka ah sameynteeda maal maha iyo habeenada bisha ramadaan ee barakaysan annagoo Allaah weydiisanayna inuu noogu kaalmeeyo acmaashaas gudashadeeda, waxaana ka…
iftineducation.com – Is badalada dhanka cunada ee kugu imaanaya xilliga soonka ayaa suura gal ay tahay in jirkaada dareemo xoogaa dhibsasho ah . Hadaba iftineducation ayaa ku siineysa talooyin ah cunooyinka culeyska ku dareensii kara ee ay haboon tahay in aad badsan . 1- Hilibka shiilan iyo cunooyinka ay ka midka yihiin Bataatiga iyo zambuuska maadaama ay ka kooban yihiin heer…
Yaa Haboon In Jimicsiga Jirka La Sameeyo Ka Hor Afurka Ama Ka Dib ? Xog Ayaan Ku Haynaa.
iftineducation.com – Xilliga bisha ramadaan dadka qaarkii ayaa sameeya jimicsi xilliga maalintii ama ka hor waqtiga afurka ugu yaraan hal saacad halka qaarkoodna ay durba sameeyaan ka dib afurka hadaba labadaas waqti yaa haboon ? iftineducation ayaa talo kuu haysa. Waxaa la xusayaa in ay haboon tahay in jimicsiga jirka la sameeyo ka dib laba saacadood xilliga afurka , iyadoo khubarada…
Ka Digtoonoow Cunooyinkaan Xilliga Afurka Haddii Kale ..
iftineducation.com – Qaladaad dhanka conooyinka ah ayaa ka dhaca dadka sooman ee Somalida ah iyadoo ay haboon tahay in arintaas taxadar laga yeesho , waxa ayna iftineducation ku siineysaa dhowr arimood oo qalad ah oo ku aadan dhanka cunadaada ah xilliga Ramadaanka . 1- In aad qaadato biyo aad u badan waqtiga saxuurta iyo ka hor aadaanka koowaad ee salaadda subax…
Xilliga Ramadaanka Madax Xanuun Ma Isku Aragtaa ? Xal Ayaan Ku Haynaa.
iftineducation.com – Dad badan ayaa ka sheegta madax xanuun xilliga ramadaanka gaar ahaan maalmaha ugu horeeya bishaan , waxaana arintaan sabab u ah arimo dhowr ah , iyadoo aan idin hayno habab aad uga fogaan karto arintaas. Unugyada maskaxda ayaa u baahan Oxygen xanbaarsan hemoglobin halka sidoo kale unugyadaas u baahan yihiin noocyada sokorta iyo glucose-ka Xilliga soonka hoos ayuu u…
Sheeko : Wey Isirtay ileen Waa La Qabaa !!! Qeybta 6-aad
iftineducation.com – Habeen habeennada ka mid ah ayaa aniga iyo iyada oo wada socona oo marayna dhabbaha u dhexeeya waddada lixaad ee iyo tan dodobaad oo xaafadda Islii ayaa waaxa naga hor timid gabar dheer oo xiran xijaab madoow waxay gacanta ku sidataa bac ay ka buuxaan alaabo xaggeyga ayay ku beegnayd qoftu markay nagu so dhawaatay ayay inta majiiratay dhankii…
Burcad badeeda oo dhaqaale xumo soo wajahday, weeraradii uu yaraaday.
iftineducation.com – Hay’ada caalamiga ee maraakiibta iyo badaha IMB fadhigeeduna yahay caasimada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia, ayaa soo saartay warbixin ay kaga hadleyso hoos u dhaca ku yimid weeraradii ay geysan jireen kooxaha burcad badeeda Soomaalida. Hay’ada ayaa sheegtay in hoos u dhac aad u daran uu ku yimid weeraradii ay geysan jireen kooxaha burcad badeeda Soomaalida tan iyo sanadkii…
Gabar yahay ma doonaysaa in aad jeclaato ninkaada Muslimka ah ee Xalaasha kugu qabo Aqriso 20 Qodob oo diini ah
iftineducation.com – Hadaba Gabaryahey ma dooneysa in uu ku jeclaado ninkaaga muslimka ah oo xalaasha kugu qaba ogow waxad la imaada arimahan so socda waana huba inaad is badal sameyn doontid hadii aad la timaado. 1- Ugu horeeyn allaah ka cabso, oo wuxuu ku amray oo dhan la imow Sunada nabi muxamad salalahu calayhi wasalam qabso. 2- Marka xigta iska ilaali…
Profasooro beeniyey in ay dowladda mucaarad ku yihiin
iftineducation.com – Xalay waxaa kulan ku yeeshey Nairobi siyaasiyiin xilal kasoo qabtay dowladda Soomaaliya iyo kuwa hadda xilal ka haya, kuwaasi oo la sheegey in ay samaysteen isbahaysi siyaasadeed oo dowladda ka dhan ah. Cali Khaliif Galeyr, Cali Maxamed Geele, iyo Cabdiraxmaan Baadiyoow ayaa war si wada jir ah usoo saareen ku sheegey in been abuur tahay wararka sheegaya in ay…
Guddoonka baarlamaanka oo xabadka u garaacday Xassan Daahir Aweys
iftineducation.com – Guddoomiyaha baarlamaanka Prof Jawaari oo markii ugu horeysey ka hadlay xariga Sheekh Xassan Daahir Aweys ayaa sheegey in baarlamaanka uusan marnaba ogolaan doonin in xuquuqda Xassan Daahir lagu xadgudbo. Waxase uu codsaday in kiiska wadaadka aanan la qabyaaladaynin, lagana warsugo garsoorka dalka, isaga oo intaasi ku daray in heynta la hayo ay tahay wax amaankiisa ku xiran. Laamaha amaanka…